इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न स्थायी कोष स्थापना « News of Nepal
इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न स्थायी कोष स्थापना
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । सरकारले इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न स्थायी कोष स्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २२ भदौको बैठकले ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष’ स्थापनाको निर्णय गरेको हो ।
कोषमा नेपाल सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ राख्ने भएको छ । प्रदेश ३ सरकारबाट रु. १ करोड, काठमाडौं महागरपालिकाबाट २ करोड र गुठी संस्थानबाट ५० लाख रुपैयाँ रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस कोषमा जम्मा हुने रु. ५ करोड रकमको व्याजबाट वर्षेनी जात्रा खर्च व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कोष संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा एक समिति बन्ने छ ।
समितिले प्रत्येक वर्ष इन्द्रजात्रामा गरिने खर्चको बाँडफाँड गर्नेछ । उक्त जात्राको संचालन इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिले गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इन्द्रजात्राको संचालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाइने र यसको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको छ ।